Vaovao - valves lehibe ho an'ny ekena siantifika ho an'ny tetik'asa Water Sivily
Fiaraha-mientan'ny Universal & Rubber
valves roa hebreo hafakely ho an'ny tetik'asa Water Sivily
Manolotra valizy lolo eccentric indroa amin'ny DN150-2500 natao miaraka amin'ny faharetana mifantoka. Ny kapila mitongilana sy voaro mafy, ny famolavolana tombo-kase nohavaozina ary ny faritry ny zoro arovan'ny haravoana dia endri-javatra rehetra mifanaraka amin'ny fenitry ny API609, BS5155
Latsaka ambany ny lohany / Mety ho an'ny serivisy fanintelony. / Doban'ny eccentric avo roa heny dia manome torolàlana ambany fikororohana, fidirana malalaka ary asa tsara.
Ny seza eccentric roa dia manome fikorontanana ambany, fanoherana fanoherana ary serivisy lava. / Zorony marindrano ho an'ny tsorakazo sy tsanganana mitsivalana raha tsy voatery.
Ny peratra famehezana azo antoka voapetraka ao anaty kapila dia azo ovaina sy azo soloina / Standard SS304 ho an'ny peratra seza vatana sy peratra fihazonana, ireo fitaovana hafa dia tsy voatery.
Mpiasan'ny kankana ho an'ny fenitra, karazana fandidiana hafa dia azo alaina amin'ny fangatahana.
Ny valizy lolo Double Eccentric no ampiasaina amin'ny tamba-jotra sy tobim-pamokarana. Omena vatana flanged boribory sy lolo na kapila ho singa manentsina. Ny kapila dia omena tombo-kase izay napetraky ny peratra amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony.
Izy io dia misy amin'ny eccentricity iray na roa ao anaty kapila. Noho io eccentricity io dia ambany kokoa ny fifanenjanana eo amin'ny tombo-kase sy ny seza. Ny fantsom-pifandraisana teleskopika azo apetraka dia manampy hamongotra ny valizy.
Fotoana fandefasana: Feb-23-2021